သင်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေမယ့် အချက် ၁၄ ချက် (၂)
သင်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေဖို့အတွက် ကျန်ရှိနေတဲ့ အချက် (၇) ချက်ကို ဆက်လက်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၈. လေ့လာမှုနေရာ အတည်တကျ ဖြစ်ပါစေ။
- ဆူညံမှု၊ အနံ့အသက်ဆိုး၊ မြင်ကွင်းဆိုးတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာ သင်စာကျက်လေ့လာဖို့ နေရာရွေးချယ်အသုံးပြုပါ၊ ဒါပေမယ့် အဆိုပါနေရာမှာပဲ အတည်တကျ အမြဲစာပေလေ့လာပါ၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာ နေ့စဉ်ပြောင်းလဲလေ့လာတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
၉. အရေးမကြီးတဲ့အချက်တွေကို မေ့ထားပါ။
- စာတစ်ပုဒ်မှာ အရေးကြီးတဲ့အချက်နဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှု စာကြောင်းတွေဆိုတာ ရောပါနေပါတယ်။ ဒီအတွက် သင်က စာကို အလွတ်ကျက်လိုက်တဲ့အတွက် စာတစ်ပုဒ်လုံးရသွားတာမှန်ပေမယ့် စာအများကြီးကို မှတ်သားထားနေရပါတယ်။
- အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို မှတ်စုထုတ်မှတ်သားပါ၊ ကျန်စာသားတွေကို ဖတ်ရုံလောက်သာဖတ်ပြီး အားလုံးမမှတ်ဘဲ မေ့ထားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. တစ်နေရာတည်းမှာ ထိုင်ပါ။
- သင် စာသင်ကြားရတဲ့ စာသင်ခန်းအတွင်း သင်ရဲ့ထိုင်ခုံနေရာဟာ ဘယ်နေရာမှာရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါနေရာမှာပဲ အမြဲထိုင်နေပါ။ ထိုင်ခုံတစ်နေရာတည်းမှာ အတည်တကျထိုင်ပြီး လေ့လာမှုက သင်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသလို စာပိုရစေတာတွေ့ရပါတယ်။
၁၁. ပုံမှန် အိပ်စက်ပါ။
- သင်ရဲ့အိပ်ချိန်ကို ပုံမှန်သတ်မှတ်ထားပါ။ တစ်ရက် ၆ နာရီ သို့မဟုတ် ၈ နာရီ အထိ အိပ်စက်ခြင်းဟာ သင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်စွမ်းအင်အတွက်ရော ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အကောင်းဆုံးအိပ်သင့်တဲ့ အချိန်ပါ။
- သင့်အနေနဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် စာမေးပွဲရက်အနီးမှာ အိပ်ချိန်အနည်းငယ်ပဲယူပြီး လေ့လာမှတ်သားနေတယ်ဆိုရင်တောင် သတိထားပြီးတော့ စာမေးပွဲရက်မတိုင်ခင် သတင်း ၁ ပတ် အလိုမှာ အိပ်ချိန်ကို ၆ နာရီကနေ ၈ နာရီအတွင်း ထားရှိအိပ်စက်ပေးပါ။
၁၂. စားသောက်မှု မှန်ကန်ပါစေ။
- အလွန်အကျွံစားသောက်မှု မလုပ်ပါနဲ့၊ အိပ်ရေးပျက်ခံနိုင်အောင် အားဖြည့် အချိုရည်အများအပြား သောက်ခြင်း၊ အိပ်ချင်စိတ်ပျောက်အောင် အချဉ်ထုတ်အစားများခြင်းတွေဟာ သင်ရဲ့လေ့လာမှုစွမ်းအားကို ကျစေပါတယ်။
- အစားအစာအားလုံးကို မျှတအောင်ပဲစားပါ၊ အထူးသတိပြုစရာအချက်က စာပေလေ့လာချိန်တွေမှာ မနက်စာလုံးဝမစားပဲ မနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၃. မနက်တိုင်း ပြန်စဉ်းစားပါ။
- မနက်ခင်းတစ်ခုအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းအသစ်မလေ့ကျင့်ခင် သင်မနေ့က လေ့လာခဲ့သမျှကို ပြန်စဉ်းစားပါ၊ တွက်ပါ။
- တကယ်လို့ ပြန်စဉ်းစား၊ ပြန်တွက်ချိန်မှာ မေ့နေခဲ့ရင် သင့်အနေနဲ့ သင်ခန်းစာအသစ် မလေ့ကျင့်နဲ့ဦး၊ မနေ့ကစာကိုပဲ ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးပါ။
၁၄. စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခြင်း။
- အစမ်းစာမေးပွဲတွေအားလုံး မလွတ်တမ်းဖြေဆိုပါ၊ မေးခွန်းဟောင်း လေ့ကျင့်ပါ၊ အစဉ်လိုက်ဖြေဆိုမှုပုံစံထက် သင်ရပြီးသား၊ လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အရင်ဖြေပါ။
- ခက်ခဲတဲ့ပုစ္ဆာတွေကို နောက်မှ ဖြေပါ၊ ဖြေဆိုပြီး အဖြေကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်စစ်ဆေးပါ၊ မေးခွန်းတစ်ခုတည်းအပေါ်မှာ အချိန်အများကြီး သုံးပြီး စဉ်းစား၊ တွေးတောမှု မလုပ်ပါနဲ့၊ စာမေးပွဲဟာ အချိန်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
ဒီတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မိမိမှတ်ဥာဏ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ရန် လမ်းညွှန်မှုအတွက် လိုအပ်သော ဆရာ၊ ဆရာမများကို sayar.com.mm ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အိမ်စာမလုပ်ချင်တဲ့ကလေးများကို ဒီနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းကြည့်လိုက်ပါ
၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအတွက် မြန်မာစာဘာသာရပ်မေးခွန်းပုံစံ
ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲ အကောင်းဆုံး ဖြေဆိုနိုင်ဖို့အတွက် အချက်များ
Whizz Kids Education Centre
Infoava Co., Ltd.